Badweyntimes.com » FAALLO: Qaladaadka Yaabka leh ee la Calaamadeeyay Xiliga khudbadaha Jeedinayeen Musharaxiinta…Badweyntimes.com
FAALLO: Qaladaadka Yaabka leh ee la Calaamadeeyay Xiliga khudbadaha Jeedinayeen Musharaxiinta…
Anshaxa doorashada ee Dhagaysiga Khudbadaha Musharixiinta U tartamay xilka Madaxweynaha Soomaaliy.
Maxaa ka qaldan xildhibaanada wakiilka ka ah bulshada soomaaliyeed inay sifiican u dhageystaan oo ay ixtiraamaa siiyaan dhageysiga Khudbadaha musharaxiinta u Tartamaya Xilka Madaxweynaha soomaaliya.
Markaad Daawato TV soo gudbinaya jawiga goobta ay ka socoto khudbada musharaxiinta waxaad dareemaysaa in aaney xildhibaanadu muujinen ixtiraamka iyo Qadarinta in wax la dhageysto in lagu jiro waqti Doorashada Madaxweynaha.
Sidaan wada og tihiin musharaxiintu waqtiga ay hadlayaan waa waa 30 Daqiiqo markaa haday xildhibaanadii intooda badan Maqan yihiin . kuwii joogayna iska sheekeeysanayaan Qaarna ku mash Quulsan yihiin Telefoonada ay wataan waxaa aan soo sheegay TV ayaa soo Gudbiyey
Markaa sow maaha in aaney xildhibaanadu garan xuquuqda lagu leeyahay taas oo ah Tixgalinta Anshaxa iyo xeer hoosaadka ay xildhibaanadu ansixiyeen iyagaa wixii ay ansixiyen diidan yihiin inay ku dhaqmaan waa arin Nasiib daro ah.
Waxaa igu khasbay inaan Faalladan Qoro markaan arkey mudane Tarsan oo cambaareeyay xildhibaanada oo ka tegay xaruunta Barlamaanka oo uu sheegay inuu faaruq yahay Hoolku.
Arinka wax la Qaadan karo maaha Waxay shiki galisay kalsoonidii shacabkii ka Daawanayey Tvyada sida Tooska ah u Tabinayey.
Markaa sow iskama cadda inay xildhibaanada intooda Badan ay muujiyeen inaaney wax macna ah ugu Fadhin khudbada musharaxiinta.
Mudanayaasha xildhibaanada ah intooda badan ku adkaatey inay wax dhageystaan muda yar oo 4saacadoo maalintii ay iyo dhageysiga khudbadaha oo socdey afar maalmood sow in la isweydiiyo maaha sidee ugu adkeysan karaaan inay wadanka afar sano Gaarsiiyaan shaqo wanaagsen oo lagu gaaro Doorashadan mid ka wanaagsan . Jaawaabtu waa Akhrisyaasha inay Fahmaan Faalladeyda.
Markaa xaalka soomaaliya wali Mahayno Dad dulqaad u leh inay umadan dhibka kasaaraan .
W/Q: Maxamed Caalim
Akhriso: Musharax Xasan sheekh oo Fariin Codsi ah usoo diray Reer Muqdisho…
SAWIRO+XOG SIRDOON: Xaruunta NISA & Hotel City Palasa oo loo diyaariyay Qaraxyo & Weerar Toos ah…